Football Khabar » बार्सिलोनाको आकाशबाट रियलले डि लिग्टलाई ‘हाईज्याक’ गर्ने !
बार्सिलोनाको आकाशबाट रियलले डि लिग्टलाई ‘हाईज्याक’ गर्ने !
स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडले नेदरल्यान्ड्सका युवा डिफेन्डर डि लिग्ट भित्र्याउन सक्रियता बढाएको छ । उसले आफ्नो खास प्रतिस्पर्धी क्लब बार्सिलोनाले मुख्य टार्गेटमा राखेका १८ वर्षीय स्टार खेलाडी ‘हाईज्याक’ शैलीमा भित्र्याउन आफ्ना प्रतिनिधि खटाएको रियल मड्रिड निकट मानिने ‘मार्सा’ ले जनाएको छ ।
डच क्लब आयाक्सबाट खेलिरहेका डि लिग्टमाथि यतिबेला युरोपका अधिकांश ठूला क्लबले आँखा लगाइरहेका छन् । खास गरी उनलाई बार्सिलोनाले महत्त्वकांक्षी योजनासाथ अनुबन्ध गर्न यो समरको सुरुबाटै प्रयास गरिरहेको छ । तर, बार्सिलोनाले आजसम्म ठोस प्रगति गर्न सकेको छैन ।
त्यसैगरी, डि लिग्टका लागि इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड र फ्रेन्च क्लब पिएसजी पनि दौडमा छन् । उता, इटालीको युभेन्टस पनि युवा डिफेन्डर भित्र्याउन प्रयासरत छ ।
यी सबै दृश्यबीच रियलका प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानको योजनामा रियलले डि लिग्ट भित्र्याउन सक्रियता बढाएको हो । रियलले डि लिग्टका लागि बार्सिलोनाले भन्दा आकर्षक सेवा–सुविधा अफर गर्ने तयारी गरेको छ ।
जिदानले क्लबको भविष्यलाई समेत ध्यानमा राख्दै युवा खेलाडीका लागि आकर्षक पैसा खर्चिन परे पनि पछि नपर्न क्लबलाई सुझाव दिएको खबरमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति ६ असार २०७६, शुक्रबार ०९:५९